Imaaraadka Carabta oo ku dhawaaqay arrin xasaasi ah oo ka sii dartay xiisaddii dalalka Carabta | Arrimaha Bulshada
Home News Imaaraadka Carabta oo ku dhawaaqay arrin xasaasi ah oo ka sii dartay xiisaddii dalalka Carabta
Imaaraadka Carabta oo ku dhawaaqay arrin xasaasi ah oo ka sii dartay xiisaddii dalalka Carabta
Friday, June 09, 2017 News Edit
Bulsha:- Imaaraadka Carabta ayaa ku hanjabay inay cunaqabateyn dhaqaale saari doonaan Qatar, halka dowladda Bahrain ay sheegtay in wax walba oo lagu ciqaabi karo Qatar ay miiska saaran yihiin.
Wasiirka arrimaha dibedda Imaaraadka Anwar Gargash ayaa sheegay in dhibaato dhaqaale oo la gaarsiiyo Qatar ay lagama maarmaan noqon doonto hadii dalkaasi aanu ballan qaadin inuu beddelayo siyaasaddiisa hubeynta kooxaha argagixisada.
Qatar waa ay beenisay inay taageero siiso wax kooxo argagixiso ah.
“Anagu ma dooneyno inaan beddelo maamulka dalka Qatar, hase yeeshee waxaan dooneynaa in la beddelo siyaasadda dalkaas” ayuu yiri Gargash.
Hanjabaadda cusub ee Imaaraadka ayaa imaneysa ayada oo dowladda Kuwait iyo sidoo kale Mareykanka ay isku dayayaan inay xal u helaan xiisadda ka dhex aloolsan dalalka Carbeed.
Dhowr dal oo Carab ah, sida Sacuudiga, Masar, Imaaraadka iyo kuwa kale ayaa horey xiriirka ugu jaray dalak Qatar oo lagu eedeeyey taageerada kooxaha argagixisada, iyo xiriir dhow oo kala dhaxeeya dalka Iran.
Cunaqabateyn dhaqaale ayaa dhaawac xoogan gaarsiin karta dalka Qatar oo si aad ah ugu xiran dalalka kale ee Carbeed ee deriska la eh.